ओली कहिल्यै राष्ट्रवादी होइनन्, उनका लागि राष्ट्रवाद राजनीतिक खेल मात्र- मैनाली - Everest Dainik - News from Nepal
ओली कहिल्यै राष्ट्रवादी होइनन्, उनका लागि राष्ट्रवाद राजनीतिक खेल मात्र- मैनाली
यदि राजा ज्ञानेन्द्र ‘पपुलर’ थिए भने राजतन्त्र हट्दै हट्दैन थियो
राजा ज्ञानेन्द्रको पहिलो ‘कू’ (१८ असोज ०५९) हुनुमा राजनीतिक दलहरुलाई दोष लगाएपछि नेकपा एमाले स्थायी समितिबाट निकालिए, राधाकृष्ण मैनाली । त्यसपछि शाही सरकारमा मन्त्री हुँदै गणतन्त्र स्थापनापछि माओवादीमा प्रवेश गरे । पछि माओवादी पनि छाडे र एमाले प्रवेश गरे । स्थायी समितिमा पुनःस्थापना नगरिए पार्टीमा नफर्किने भनिरहेका मैनालीलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षअघि केन्द्रीय सदस्यका रुपमा पार्टी प्रवेश गराएका थिए । तिनै मैनालीसँगको संवाद :
दुई वर्ष वितिसक्यो एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तपाईँलाईअझै स्थायी समिति सदस्य बनाएनन् है, अप्ठेरो लागेको छैन ?
अध्यक्ष भइसकेपछि केपी ओली आफैँ मेरो घरमा आए । कर गरे, ‘ पार्टीको नेता तिमी, मेरै नेता पनि तिमी । तिमी बाहिर, मचाहिँ एमालेको अध्यक्ष भएर बस्दा त्यति राम्रो सन्देश जान्न ।’ त्यस दिन म केही बोलिनँ । केही दिनपछि आफ्नै घरमा बोलाए । त्यही कुरा दोहोर्‍याए । मैले त अलिक पछि निर्णय गर्छु भनेको हो । उनी कराए, ‘पछि के निर्णय गर्छौ ? अहिले केन्द्रीय समितिमा आऊ, पछि स्थायी समितिमा ल्याइहाल्छु नि ?’ उनको ‘बडिल्याङ्ग्वेज’ हेर्दा मलाई लाग्यो, पछि स्थायी समितिमा कसो नलैजालान् त तर, दुई वर्ष बितिसक्यो, लैजाँदैनन् । बीचमा एक–दुईपटक सम्झाएँ पनि । मेरै बारेमा बिहान–बेलुकी कुराकानी गर्न जाऊँ, त्यो पनि भएन । त्यसैले मैले अलिक असहज महसुस गरेको छु ।
ओलीजीसँगभेटघाटका बेला केही कुरा भएको छैन ?
माधव नेपालले रोकेका त हैनन् ?
याे पनि पढ्नुस प्रचण्डलाई निचोरेर पार्टी एकता सफल हुँदैनः राधाकृष्ण मैनाली
तपाईं दाजु–भाइ (सीपी मैनाली) बीचको फुटले गर्दा पनि हो कि ?
एकले अर्कोलाई तानेर हामी नेता भएका होइनौँ । आ–आफ्नो सोचाइ र पृष्ठभूमिका साथ हामी राजनीतिमा अघि बढेका हौँ । त्यसैले दाजुभाइ फुटेकैले यस्तो भइयो भन्ने लाग्दैन ।
अहिले ओलीको राष्ट्रवादको यत्रो चर्चा भएको छ, तपाईँ चै किन नी असन्तुष्ट ?
उसो भए, तपाईँले चिनेका ओली र अहिलेका ओली बदलिएका हुन् ?
अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी नियाल्दै हुनुहुन्छ ?
कतिपयले त एमाले लगायतका दलको कारण राजतन्त्र फर्केला भन्छन, त्यस्तो संभावना देख्नुहुन्न ?
तपाईँको थुप्रै कुटनीतिक निकायका पूर्व कर्मचारीसँग पनि भेट हुन्छ होला के भन्छन उनीहरु ?
साँच्चै भन्नु त राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र ल्याएको दिन तपाईँले कस्तो महसुस भएको थियो ?
त्यस्तो पनि होइन । म त खुसी नै थिएँ राजतन्त्र जाँदा । राजाहरूमा एउटा आदर्श होला भन्ने लाग्थ्यो । नजिकबाट हेर्दा त्यस्तो होइन रहेछ । राजाहरू पनि नेताजस्तै आफ्नै मात्र स्वार्थ हेर्ने प्राणी रहेछन् । त्यस्तो संस्था गयो, नेताहरू पनि अब फिर्छन् होला जस्तो लागेको थियो । तर, हाम्रो दुर्भाग्य १
संविधान संशोधनमा एमालेले हलो अड्काइरहने, मधेसी नेता संशोधनसहित चुनावमा जाने भन्ने हठले नेपाली राजनीतिलाई कहाँ लैजाला ?
संविधान कार्यान्वयन नगर्ने भए राजतन्त्र फर्काउनु पर्ला ?
कति ठाउँ चहारी हिँड्नु मैले यो उमेरमा १ त्यसैले विचार जोसँग मिले पनि बस्नचाहिँ एमालेमै बस्छु । नातागोता सबै एमालेमा छन्, हात मिलाउने साथीहरू पनि यहीँ छन् । म जहाँ पुगे पनि एक्लै जाने हो । अरूहरू मसँग जाँदैनन् । तर, एमालेमा बसिया’छ, केही काम गर्नु पनि पर्‍या’छैन । रमिता हेर्‍या’छु, बस्या’छु । यसभन्दा आनन्द अरू केमा हुन्छ ?
हामीले यो सामग्री नेपाल साप्ताहिकबाट साभार गरेका हौं । सम्पादक
ट्याग्स: radha krishna mainali